10 Nzvimbo Dzakanakisisa Dzemusango Munyika | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Nzvimbo Dzakanakisisa Dzemusango Munyika
Eco Kufamba Matipi, Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Chitima Kufamba China, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Travel Europe
99% yevanotsvaga mhuka dzesango vanosarudza kuenda kuAfrica kune epic safari rwendo. zvisinei, isu takasarudza iyo 10 nzvimbo dzakanakisisa dzemhuka dzesango munyika, kubva kuEurope kuenda kuChina, vashoma-vafamba, asi nzvimbo dzisingakanganwike uye dzakakosha.
1. Jiuzhaigou MuChina
Kumba kune 40% yemhando yemhuka dzesango, nemhuka muChina, mupata weJiuzhaigou ndiye 4800 metres pakukwirira. Jiuzhaigou Valley mumwe 10 nzvimbo dzakanakisisa dzemhuka dzesango munyika ine mukare nzvimbo uye akapfuma ecosystem.
MuJiuzhaigou Valley, iwe uchave nemukana unokosha wekuona iyo hofori Panda, Panda tsvuku, Sichuan takin, uye tsoko ine mhino. Aya angori mashoma emamwe mhuka dzisingawanzo kugara mumupata weJiuzhaigou kwemazana emakore. Idzi mhuka dziri panjodzi dzinogara munzvimbo yemapopoma, munyanza, makomo ematombo, uye Krast mafomu, nzvimbo yerunako runoshamisa iyo inosimudzira mweya yako uye zororo remhuka dzesango kune imwe nhanho nyowani.
Iri Kupi Iyo Jiuzhaigou Valley MuChina?
Iyo yakanaka Jiuzhaigou Valley iri mudunhu reSichuan kuChina uye inowanikwa kubva kuBeijing kana kuChengdu.
2. Nzvimbo Dzakanakisisa Dzemusango Munyika: Shennongjia MuChina
Kuti uone iyo Sichuan Snub-yemhuno Tsoko haudi kuenda kure nekuti iyi tsoko isingawanzo inogara mumasango epakati peChina.. Ndizvozvo, iyo Shennongjia Nzvimbo Yemhuka mudunhu reHubei ndiko kune tsoko inosemesa, chena bere, makore, ingwe dzakajairika, uye beya dema reAsia.
Pamusoro pe, iyo Shennongjia Natural Reserve yakanakisa zvine mutsindo nepamusoro-soro uye nzizi dzakadzika. Kubva panguva yechando kusvika muzhizha, iwo maonero echisikigo echimiro anochinja mukati megore, kuvimbisa chiitiko chakasiyana pese paunofunga kushanyira. zvisinei, nguva yakanakisa yekushanya ndiMay kusvika Gunyana, uye unofanira bhuku matikiti ako.
Iripi Iyo Shennongjia Yemahombekombe MuChina?
Iyo Shennongjia inochengeterwa iri pakati peChina, uye zviri nani kuti ugadzire mhuka yako yemusango mudhorobha reMuyu.
3. Nzvimbo Dzakanakisisa Dzemusango Munyika: Mount Huangshan MuChina
Kufuridzirwa kune vadetembi nevanyori, hazvishamise kuti Gomo reHuangshan inzvimbo inoshamisa yemhuka dzesango munyika. Huangshan inowanikwa munzvimbo inodziya yemamiriro ekunze mudunhu reAnhui. saka, kuwedzera kune gondo rine mavara, uye katsi yemusango yeAsia, zvirimwa uye maruva pano ndeanodiwa uye akasarudzika muChina chose.
Mhuka dzesango dzisingawanzo’ Nzvimbo inogara miti yemapaini yekare uye mabwe egranitic, kwaunogona kubhururuka pamusoro pemakore. Zvese zvaunoda kuti uite kusarudza imwe yeiyo 70 misoro munzvimbo yekufema maonero anoyevedza yenzvimbo yekuchengetedza zvisikwa. Pazasi mutsara, nezvakawanda zvekuona, unofanira bhuku 2-3 mazuva echinhu chisingakanganwiki zororo remhuka dzesango muHuangshan.
Iri Kupi Gomo reHuangshan Nature Reserve MuChina?
Mount Huangshan ndiye 3 maawa kubva kuShanghai na soro-nokukurumidza chitima, mudunhu reAnhui.
4. Nzvimbo Dzakanakisisa Dzemusango Munyika: Liguria yeDolphins MuItari
Liguria uye Cinque Terre dzinozivikanwa nekuda kwemavara uye akajeka mahombekombe nemataundi. Kana iwe usina kuziva, Liguria zvakare inonakidza nzvimbo yekuenda kune whale uye dolphin kutarisa. Kubva muna Chivabvu kusvika munaGunyana, iwe unogona kuenda kune imwe yeakawanda eakafambiswa echikepe muLiguria mukutsvaga mushure mekunakidza hupenyu hwemugungwa muItari.
Mahombekombe akajeka uye mawere paCinque Terre azere nemakara akavanzika, uye zvishamiso pasi pegungwa. saka, kubva muchikepe kana kunyura mukati, uye snorkeling, iwe uchashamiswa nemhuka dzesango dzemugungwa muLiguria. Zororo remhuka dzesango muLiguria hapana mubvunzo kuti imwe yenzira dzakanakisa dzekushandisa zhizha.
La Spezia kuenda kuRiomaggiore Ine Chitima
Florence kuenda kuRiomaggiore Nechitima
Modena kuRiomaggiore Ine Chitima
Livorno kuenda kuRiomaggiore Nechitima
5. Wemusango Wemazororo MuPyrenees
Shiri dzinodya nyama segondo regoridhe rinokwira pamusoro pemusoro wako, uye chamois nembudzi mumakwara, iyo Pyrenees ndiyo imwe nzvimbo yakanaka yemhuka dzesango munyika. Makomo anoshamisa anosvika pamusoro, nguwani dzechando, uye kukura chimiro, iyo French Pyrenees park ndeimwe yenzvimbo dzakanakisisa dzemhuka dzesango muEurope.
saka, pamusoro pekukwira munzvimbo dzinoyevedza dzePyrenees, iwe unogona kuenda parwendo rwekutevera bheya, kana shiri dzinobata kushanya kwekutora. Kunyangwe maPyrenees eFrance ari nzvimbo inozivikanwa yezororo kuEurope, nzvimbo yacho yakakura zvekuti haufanire kunetseka nezve vamwe vafambi vanotyisa iyo mhuka dzesango uye dzakanaka.
Ndeipi NdeYakanakisa Nzira Yekusvika Kuiyo French Pyrenees?
Kutora iyo Eurostar kubva kuLondon, uye ipapo iyo TGV chitima kubva kuParis kana Lille kuenda Toulouse ndiyo yakanakisa nzira yekufamba kuenda kuPyrenees.
6. Nzvimbo Dzakanakisisa Dzemusango Munyika: Iyo Camargue In France
Iyo Camargue yenyika yakachengetwa muFrance yakagadzirwa mu 1972 uye ari paki inochengetedzwa yenyika. Still, madziva nemadondo ndiyo nyika dzakachengetedzwa zvakanyanya muEurope, uye pano pane musha ku 400 mhando dzeshiri uye yakakura pink pink flamingo.
Pano iwe zvakare uchave nemukana wekufamba uchitevedza rwizi rukuru muEurope, Delta, uye tsvaga mabhiza emusango. Uyezve, Simwe yeshiri dzakasarudzika dzaungaona apa ndiPepuru Herons, Little Terns, naGull-musoro musoro.
Nguva yakanakisa yekuenda iri mukati mezhizha panosvika shiri uye grey mabhiza.
Ndeipi NdeYakanakisa Nzira Yekuenda KuCamargue?
Unogona kutora chitima kubva kuParis kuenda kuNimes, Marseille, kana Arles, uyezve bhazi.
7. Fisser Hofe MuAustria
517 makiromita emhuka dzesango, iyo Fisser Hofe kumadokero kweTyrol ndeimwe yezvakanakisa zvakachengetedzwa zvakavanzika zveAustria. Havasi vazhinji vanoziva nezve ino nzvimbo, asi pano iwe unowana akanaka mavara emhuka dzesango kutora mifananidzo.
Muchirimo iyo Fisser Hofe iri mukuzara zvizere, uye iwe unogona kunge uine rombo rakaringana kutora rakanakisa Apollo butterfly. zvichida, iwe uchaona gondo Dema padenga, kana imwe chamois yemusango, ibex, nenguruve. zvisinei, nzira yakanakisa yekuona mhuka dzisingawanzo kukwira kukwira gomo, kuti 3000 mamita, mune imwe yenzira dzakawanda muFisser Hofe.
Ndeipi NdeYakanakisa Nzira Yekusvika Kune Iyo Fisser Hofe MuAustria?
Unogona kufamba nezvitima zveOBB kubva maguta makuru muAustria kuenda kuguta reFiss muTyrol. Salzburg, Vienna, kana Innsbruck kuenda kuFiss neOBB chitima inzira dzinozivikanwa dzekufamba kwechitima.
8. Nzvimbo Dzakanakisisa Dzemusango Munyika: Mhuka Dzesango MuRwizi rweDanube
Kubva ku Dondo Dema kuGerman, kuyambuka Europe kuenda kuRomania, rwizi rweDanube ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzemhuka dzesango pasi rese. saka, sosi huru yemvura uye chikafu, hazvishamise kuti rwizi rweDanube ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuona mhuka dziri panjodzi.
Semuyenzaniso, chirahwe chidiki chemuEurope ndechimwe chezvakanakisa 400 marudzi eshiri anogara muRwizi rweDanube. Pamusoro pe, inin Zemplen Makomo, uye iyo Aggtelek yenyika paki, iwe waigona kutarisa 73 mammass marudzi, kunge gava dzvuku uye tsvuku tsuro.
9. Merfelder Bruch Nzvimbo Yekuchengetedza MuGerman
Kumba kune rekupedzisira boka remabhiza emusango muEurope uye chimwe chezvakanaka kwazvo kuona kwese kuona kwekumhanya mabhiza emusango. saka, Hohe Maka paki inzvimbo inofarira yekuona mhuka dzesango.
Pamusoro pe, pakati pemasango nenyika dzegirini, unogona kuita rombo rakanaka kuona iro rakanaka Dulmen Pony. Iyo Dulmen Pony rudzi rwebhiza, ndichigara muMerfelder Bruch, mutaundi remabhiza emusango, kana Rhine-Westphalia. Merfelder Bruch inzvimbo tsvene yemhando dzose dzemabhiza dzinogara zvakasununguka munzvimbo yadzo yepanyama.
Ndeipi Ndeipi Yakanyanya Nzira Nzira Yekuenda Ku Merfelder Bruch?
Kutora chitima kubva kuBritain kana chero kupi kuGerman kuenda Kolon neNorth Rhine-Westphalia. Ipapo iwe unogona kujoina kushanya kana kubvarura mota kuMerfelder Bruch.
10. Nzvimbo Dzakanakisisa Dzemusango Munyika: Wengen Maruva eSwiss Alps
Dzese nzvimbo dzinoyevedza pane edu 10 nzvimbo dzakanakisisa dzemhuka dzesango pasi pano dzinogara mhuka dzisingawanzo muEurope. zvisinei, Wengen musha kune dzinoshamisa mhuka mhuka uye ndeye botanical kudenga. Zvayaiva muSwiss Alps, maonero pano anotyisa, nemakomo echando, mipata yakasvibirira yakasvibira, mapopoma, uye ruva rinoshamisa kwazvo.
Muna Chikunguru mapururufuru emusango anoshongedza zvisingawanzo Lady Slipper Orchid, hwamanda gentians, zvidrage, uye mamwe maruva anoyevedza achitevedza Eiger glacier. Aya maruva anoshamisa anokura munzvimbo dzakakwirira dzeSwiss Alps, kumusoro kwemupata wakanaka weLauterbrunnen. saka, gadzirira kukwira kumusoro kumakore uye kujekesa denga rebhuruu kuti uone izvi zvishamiso zvezvisikwa.
Ndeipi NdeYakanakisa Nzira Yekusvika KuWengen Bernese Oberland?
Tora chitima kuenda kuLauterbrunnen valley, uyezve nechitima chinokwira kumusha weWengen.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga rwendo rusingakanganwiki kuenda kune imwe, kana iyo yose 10 nzvimbo dzakanakisisa dzemhuka dzesango munyika: kuyambuka Europe kana China nechitima.
Unoda here kupinza yedu blog positi "10 Yakanyanya Yemusango Nzvimbo Dzinosvika Munyika" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wildlife-destinations-world%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
shamdara.blogshamdara mhuka Netsons.ninja BestTravelDestinationsChina bestWildlifedestinationsinchina BestWildlifevacationspasi rose WildelifeDestinations mhuka dzesango